ဆ ရာ ကြီး သ ခင် ကိုယ် တော် မှိုင်း နှင့် ဗိုလ် ချုပ် အောင် ဆန်း - Real Gaming Myanmar
By Realman / 1 month ago / Blog / No Comments
အောင် ဆန်း မ သာ အ တွက် ငါ တော့ ငွေ တ မတ် မ တတ် နိုင် ဘူး ။
ဒီ က ဗျာ တ ပုဒ် သာ ယူ သွား ပါ ။
သ ခင် နု ကို ​ပြော နေ သော ဆ ရာ ကြီး ၏ မျက် ဝန်း မှာ မျက် ရည် တွေ နဲ့ …
“ သြော် … အ ဆောင် ဆောင် နန်း တွေ ကြ ဌာန်း တွေ နဲ့ နှော အ ခေါင် မ မြန်း ခင် က အောင်စာ တမ်း ချို့ စေ ဖို့ ​အောင် ပန်း ညှိုး ရ ရှာ တဲ့ ​တောင် တ မန်း တို့ ဗ မာ မှာ အ ဟောင်း သံ သ ရာ အ ငုတ် တွေ နှင့် အောင် ဆန်း တို့ မ သာ မ ယာ ဟာ ၎င်း ကံ ကြ မ္မာ အ လုပ် ပေ ထင့် သောင်း မြန် မ ရ ဏာ စ မုတ် မှာ တော့ … ချုပ် သ နှင့် ယင်း အ လို တွင် ဒေါင်း အ လံ ပ ဝါ အုပ် ပါ လို့ ကျုပ် ဖြင့် သ င်္ဂြိုဟ် ချင် ။ ”
မ နေ့ က မှ ပြန် သွား သော တ ပည့် ဖြစ် သူ ၏ ပုံ ရိပ် များ ကို ဆ ရာ ကြီး မြင် ယောင် နေ မိ သည် ။
“ ဆ ရာ ကြီး ခင် မျာ …
ဆ ရာ ကြီး​ ​မျှော် မှန်း ထား တဲ့ လွတ် လပ် ရေး ကို တစ် နှစ် အ တွင်း ရ အောင် ကျွန် တော် ကြိုးစား နေ ပါ တယ် ဆ ရာ ကြီး …
ဒီ အ တွင်း ဆ ရာ ကြီး ဘာ မှ မ လုပ် ပါ နဲ့ ဦး ” ။
ဗိုလ် ချုပ် က … ထို သို့ ပြော လေ သော် …
ဆ ရာ ကြီး က …. “ ဟေ့ … အောင် ဆန်း မင်း က ဆ ရာ လား ငါ က ဆ ရာ လား ” ဆ ရာ ကြီး ၏ ခက် ထန် ထန် စ ကား ကို ကြား လေ သော် ….
“ ဆ ရာ ကြီး ဒိ ပြင် လူ ဘယ် သူ ပြော ပြော ကျွန် တော် မ ထိ ခိုက် ဘူး​ ။
ဆ ရာ ကြီး တစ် ခွန်း ပြော ရင် ​ပြော သ လို ကျွန် တော် ထိ ခိုက် ပါ တယ် ။
ကျွန် တော် က တိ ပေး တဲ့ အ တိုင်း ဖြစ် မ လာ ရင် ဆ ရာ ကြီး လုပ် ချင် တာ လုပ် ပါ ” ဗိုလ် ချုပ် က … တောင်း ပန် လေ သော အ ခါ ဆ ရာ ကြီး လဲ … စိတ် ဆိုး ပြေ သွား ပြီး “ ​အေး ပါ ကွာ မင်း ပြော သ လို ငါ … စောင့် ကြည့် ပါ့ မယ် … ။
အ ခု တော့ … “ သြော် … တ ပည့် အ ရင်း တွေ မို့ က ဝိ မ တင်း နိုင် ဘူး ကွဲ့ သ တိ ကင်း ကာ မျက် ရည် ကျ ကျ ပြီး ခက် က ပြီ လက် ဆည် လို့ မ ရ နိုင် ဘု သော က ဘ လောင် ဆူ တော့ … ”
ပြည် ထဲ ရေး ဝန် ကြီး ၏ အ စီ အ စဉ် ကို လက် မ ခံ ခဲ့ သော တ ပည့် ကြီး လူ တ ဘက် သား အ ပေါ် ယုံ ကြည် လွန်း သော တ ပည့် ကြီး “ ကျုပ် ကို ပြည် သူ က ချစ် ပါ တယ် ဗျ ” အ မြဲ ပြော နေ ကျ စ ကား တစ် ခွန်း … အင် မ တန် ရိုး သား သော တ ပည့် ကြီး ရဲ့ရုပ် ပုံ လွှာ …
“ ဖြေ မ ကြည် နေ ရီ တော့ လွမ်း စေ ဖို့ မြန် မာ ပြည် ပေါ် ကို ဓ မ္မ စည် တော် ရွမ်း ချိန် မို့ အ စွမ်းကုန် သည် တ ခါ ဖြင့် ပြေ ရွာ ညီ ညာ ဖို့ အ လုပ် ပေ ပါ့ သုဿန် တံ ခွန် စောင်း ရ ရှား တဲ့ ရုပ် အကျန် ခု နှစ် လောင်း ရယ် နှင့် အ လွန် ကောင်း စွာ က မ္ဘာ တည် မည့် အာ ဇာ နည် ဗိ မာန်​ ပု ထိုး ကို ဖြင့် ပါ ရ မီ အ ဓိ ဋ္ဌာန် တ မျိုး ရယ် နှင့် ရှိ ခိုး ကာ ဆ ရာ ကန် တော့ ချင် ရဲ့မြန် မာ မ တော့ ပူစ ရာ ဖို့ … လူ မ သ မာ အ မှောင် သန်း ချိန် မို့ သောင် ကမ်း မို့ မို့ ဆီ က ​​ဖောင် နန်း ကူ တိုး နှင့် အ ကြေ ဒ ဂုန် တည်း ဟူ သော ရေ စုန် မျော လေ ရဲ့ …
​သြော် … တောင် နန်း မြောက် နန်း အ ဆောင် ဆောင် ကြ ဋ္ဌာန်း နဲ့ အ ခေါင် မ မြန်း ရ ခင် က အောင် ပန်း ညှို့ ရ ရှာ တဲ့ အောင် ဆန်း တို့ သေ ပုံ နှေ မြှာ ။ ။
ဆ ရာ ကြီး သ ခင် ကိုယ် တော် မှိုင်း
K o L w i n O o ( လေး စား မှု ဖြင့် ခ ရက် ဒစ် )
Previous: ဒေါ့ မွန် နဲ့ ပွဲ စဉ် မှာ ( ၈ ) နှစ် အ ရွယ် ကင် ဆာ ရော ဂါ သည် က လေး ငယ် ကို ဂိုး ၀င် ဖမ်း ခိုင်း ခဲ့ တဲ့ Sea t t leS o u nde r s ရဲ့ လုပ် ရပ်
Next: “ အိုင်း စ တိုင်း နဲ့ စ တီ ဖင် ဟော့ ကင်း တို့ ထက် I Q ရ လဒ် သာ လွန် ​နေ တဲ့ အ ထက် တန်း ကျောင်း သူ ” …